Tambo inobhadharisa yedu Apple Watch inonzi PRIME | IPhone nhau
Tambo inobhadharisa yedu Apple Watch inonzi PRIME
Apple Watch tambo dzave chishongedzo icho Apple chiri kupa zvakanyanya kukosha kwazviri. Muchokwadi, parizvino tinogona kuwana akasiyana akasiyana tambo uye mavara muApple Chitoro. Dambudziko rega ratinowana kana tichivawana iwo mutengo, uyo senguva dzose unowanzo kudhura kupfuura zvavanofanira kuita.
Mumusika tinogona kuwana nhamba huru yemabhanhire yemarudzi akasiyana, magumo uye hunhu. Nekusada MFI chitupa, tinogona kuwana zvakachipa mhando kana tikazvienzanisa nemitengo iyo Apple inowanzotipa mune zvekushandisa zveApple Watch.
Ku platform Kickstarter yauya mazano akati wandei kupfeka yedu Apple Watch nemamwe mabhandi, mamwe anobudirira kupfuura mamwe. Mazuva mashoma apfuura Chirongwa chitsva chiri kutsvaga mari chinonzi PRIME chasvika, tambo inotibvumidza kubhadharisa mudziyo wedu kuburikidza nekubatana kwepini-nhanhatu iyo yatinowana mukati megomba raishandiswa kuisa tambo. Kunyangwe kana tikazviona padhuze, kupfuura tambo zvinoita senge chinhu chinowanikwa muchimiro chetambo chatinofanira kuisa Apple Watch mukati, sekunge yaive nyaya yekudzivirira.
PRIME ichave ichiwanikwa mune maviri mavara uye mune simbi uye aluminium ekupedzisa, kune akasiyana mamodheru ayo Apple anopa pamusika. Uye zvakare, inozoenderanawo nemamodeli e42 mm uye 38 mm, kuitira kuti vashandisi vane diki diki mudziyo vagonewo kunakidzwa neichi chinowanikwa. Dambudziko pakutanga kuona nemuchina uyu kukura kwayo. Kana tangoisa Apple Watch mukati, iyo Apple Watch inova huru kwazvo mudziyo wekugona kuitakura zvakanaka mazuva ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tambo inobhadharisa yedu Apple Watch inonzi PRIME
Afterpulse inoratidza kugona kweApple TV mumitambo yemavhidhiyo